AQOON LA’AANI WAA IFTIIN LA’AANE: “War hooy Wax barta, Laacib aan ahaan jiray wax kuuma tari doontee!!.”+SAWIRRO – Gool FM
AQOON LA’AANI WAA IFTIIN LA’AANE: “War hooy Wax barta, Laacib aan ahaan jiray wax kuuma tari doontee!!.”+SAWIRRO
Byare October 17, 2018
(Europe) 17 Okt 2018. ‘Aqoon la’aani waa iftiin la’aane. Waa aqal iyo ilays la’aane’ Waa hees soomaali ah.
Daafaca reer Talyaani ee kooxda Juventus oo dhawaan qaatay shaxaadada Master ka ee ‘Business Administration’ Maamulka Ganacsiga ayaa ugu baaqay ciyaartoyda kale inay wax bartaan isagoona sheegay inaysan ahayn wax ku filan ciyaarista kubbada cagta oo qura.
“Waa inaan ciyaartooy badan oo kubbada cagta ah ku boorinaa inay wax bartaan isla markaana la kordhiyo tirada shahaadooyinka Jaamacada. Maxaa yeelay Noloshu way dheertahay.”, Chiellini ayaa sidaa u sheegay FIFPro.
“Noloshu way qurux badnaan doontaa kaddib waayaha ciyaareed ee ciyaartoyda. Laakiin waa inaad marka hore is diyaarisaa haddii kale waxaa jiri doona khatar.
“Waxaad noqon doontaa 35-jir aan garaneyn si uu ka yeelo noloshiisa, kaliya ciyaartoy tiro yar ayaa maareysa inay shaqo ka helaan kubbada Cagta.
Daafaca reer Talyaani oo 7-jeer ku guuleystay horyaalka Talyaaniga iyo koobab kale oo fara badan ayaan intaa ugu harin ciyaartoyda wuxuuna u raaciyay Digniintan:
“Sidoo kale waxaa jira khatar niyad jab ah, Waxaana jira ciyaartoy hore oo ay qabsatay dhibaatooyin dhaqaale, maxaa yeelay kama aysan fikirin waxa ay sameyn doonaan ciyaaraha kaddib.
“Maskaxdooda uma aysan furin Waxbarashada.
“Waxaa ku horyaala inta ka harsan noloshaada ciyaaraha kaddib, inaad awooday inaad ciyaarto kubbada cagta ma ahan wax kugu filan.”.
Karim Benzema oo dib ugu soo laabtay tababarka Real Madrid
Weeraryahankii hore ee kooxda Real Madrid Fernando Morientes oo si weyn u difaacay tababare Julen Lopetegui